It is me. Ko Niknayman.: ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု အုံကြွမှုကြီးအပေါ် အမြင်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု အုံကြွမှုကြီးအပေါ် အမြင်။
(ပြည်သူ့ အာဏာဂျာနယ်မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်တင်ပြပါသည်)။
Posted by Ko Niknayman at 11:14 PM